कुमारी बैंकको खुद नाफा करिब २ अर्ब, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? – BUSINESSPANA.COM
कुमारी बैंकको खुद नाफा करिब २ अर्ब, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं – कुमारी बैंक लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा खुद नाफा २ अर्ब नजिक पुगेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
विवरणका अनुसार वितरणयोग्य मुनाफा करिब १ अर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले १ अर्ब ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७८.५८ प्रतिशत बढी हो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानीसँगै अन्य सञ्चालन आम्दानी बढेका कारण खुद नाफा बढ्न पुगेको हो । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ९८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३९.०४ प्रतिशत बढेको छ भने खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ४३.६४ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, बैंकको अन्य सञ्चालन आम्दानी साढे ७ करोडबाट बढेर करिब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको सञ्चालन मुनाफा ७४.४१ प्रतिशत बढेको छ। चैत मसान्तसम्ममा बैंकको ५१ लाख रुपैयाँ इम्पेरमेन्ट चार्ज रिभर्स भएको छ ।
खुद नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको यस्तो आम्दानी ३ रुपैयाँ २४ पैसा बढेर १७ रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १८.८८ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १३५ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकको चुक्ता पूँजी १०.८५ प्रतिशत बढेको छ भने जगेडा कोष ३.७३ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप ९.५७ प्रतिशत र कर्जा १६.५५ प्रतिशत बढेको छ ।
Previous: कोरोना असर अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा
Next: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बोनस शेयर हितग्राहीको खातामा